Ngaba ukukhawulezisa kwegolide elandelayo neocolonial? Iinkqubo zokutya zaseAfrika 'yioyile entsha,' amaxwebhu e-UN athi-Ilungelo laseMelika lokwazi
ezaposwa ngomhla Matshi 9, 2021 by UStacy Malkan
Amaxwebhu ocwangciso lwengqungquthela ye-2021 yeZizwe eziManyeneyo yeeNkqubo zoKutya ikhanyisa ukukhanya kwi-ajenda engemva ingqungquthela yokutya enempikiswano ukuba amakhulu amafama kunye namaqela oluntu amalungelo aqhankqalaza. Amaqela athi umdla kwezolimo kunye neziseko ezikhethekileyo zilawula inkqubo yokuqhubela phambili kwi-ajenda eya kuthi ixhase ukuxhaphazwa kweenkqubo zokutya zehlabathi, ngakumbi i-Afrika.
Amaxwebhu, kubandakanya a iphepha elingasemva zilungiselelwe iingxoxo zentlanganiso kunye a uyilo lomgaqo-nkqubo omfutshane yengqungquthela, yazisa "Izicwangciso zorhwebo olukhulu kwiinkqubo zokutya zaseAfrika," utshilo uMariam Mayet, umlawuli olawulayo weZiko laseAfrika leZinto ezoNgohlukeneyo (i-ACB), owanika amaxwebhu kwi-US Right to Know.
Iingxoxo "zizithulu kwaye azimfama kwiingxaki eziguqukayo zenkqubo esijamelene nazo namhlanje, kunye nengxamiseko yokucinga kwakhona ukuba ifuna njalo," I-ACB isitsho kwingxelo.
A iphepha elingasemva elungiswe yiKhomishini yezoQoqosho ye-UN ye-Afrika, iKhomishini yeMbumba yamaZwe ase-Afrika, uMbutho woKutya nezoLimo we-UN kunye namaqela angamaqabane ingxoxo yengingqi Kwiinkqubo zokutya zaseAfrika zinika iinkcukacha malunga nezicwangciso eziqhubekayo. Olu xwebhu luphawula ukuba lukhutshiwe “ngaphandle kokuhlelwa ngokusesikweni nangesiNgesi kuphela ngenxa yokungeniswa kade. ”
Iphepha litshilo, "ukushenxisa utshintsho olukhulu luyafuneka," ukushenxisa i-Afrika “ukusuka kwizibhengezo zokungeniswa kokutya okubalulekileyo okuvela ngaphandle kweAfrika.” Eli phepha libalisa imeko eyoyikekayo neya isiba mandundu e-Afrika apho izigidi ezingama-256 zabantu bathwaxwa yindlala, kwaye ngaphezulu kwesiqingatha sabantu kwiindawo ezithile zeMpuma ye-Afrika banqabile ngokutya. Ubhubhane we-Covid 19 ubhebhethekisa ukungalingani kwaye ubhengeza ukuba semngciphekweni kwenkqubo yokutya e-Afrika.
Ezi zinto zitshintshayo zidala inyanzeliso koorhulumente base-Afrika ukuba benze imeko-bume evumela ukuphuculwa kwemigaqo-nkqubo kunye notyalo-mali kwimpahla yoluntu yezolimo, ukukhulisa izisombululo zedijithali kwezolimo, kunye nokuphuhlisa iindlela zokuxhasa ngemali ngentsebenziswano phakathi kukarhulumente namashishini abucala, utshilo iphepha.
“Kukwalixesha lokuba ubeke utyalo-mali apho lufuneka khona kakhulu; umzekelo, oorhulumente base-Afrika bahambisa izigidi zeedola ukuxhasa uluntu kutyalo-mali lwezolimo oluhambelana nemozulu… kwaye, ukomeleza ukusetyenziswa kwedatha enkulu ukuqhuba izigqibo ezikrelekrele kwinqanaba lolawulo lwamanzi, ukusetyenziswa kwesichumiso, ukuhambisa iintlobo zezityalo ezinganyangekiyo yimbalela kunye nokungena kwiimarike. ”
Le ajenda ihambelana ngokugqibeleleyo nezicwangciso kwishishini lezolimo, i-Gates Foundation kunye nenkqubo yayo ephambili yophuhliso lwezolimo, i-Alliance for a Green Revolution e-Afrika, ekhuthaza amazwe ase-Afrika ukuba apasise imigaqo-nkqubo elungele ushishino kunye nokukhulisa iimarike zembewu enelungelo elilodwa lomenzi, izichumisi ezisisiseko se-fossil kunye nezinye izinto zokwenza imveliso abathi ziyimfuneko ukonyusa imveliso yokutya. La maqela athi ubuchwepheshe obutsha phantsi kophuhliso kunye "noqiniso oluzinzileyo" lwezolimo lweshishini yindlela eya phambili.
Izicwangciso ezicetywayo kumaxwebhu "kukuphinda kusetyenziswe kwakhona" "izisombululo ezifanayo zobuxoki ... kunye nezibonelelo ezifanayo ezincinci ezifumaneka kwinani elincinci labadlali," utshilo i-ACB kwingxelo yayo.
"Iinjongo azikho malunga nokuguqula ubudlelwane behlabathi nentlalo-ntle yabantu base-Afrika kunye neenkqubo zethu zezinto eziphilayo kweli ziko, kodwa kukugxininisa i-Afrika ngokuqinileyo kubudlelwane behlabathi nakwimilinganiselo yophuhliso echazwe ngokoloniyalizim kunye ne-neoliberal globalization."
Icandelo lephepha lemvelaphi le-UN lifunda njengendawo yokuthengisa yabatyali mali kunye neemveliso zeshishini lezolimo, kodwa ngaphandle kokubonelela ngokupheleleyo ngengxaki ezi mveliso ezibangela ngamanye amaxesha.
“Uqoqosho oluye lwaphumelela e-Afrika kule minyaka ingamashumi amane idlulileyo luye lwasetyenziswa ngokuxhaphaza ubutyebi bezimbiwa, ingakumbi i-oyile negesi ekuthiwa yi 'golide emnyama,'” licacisa. “Ngoku, ilizwekazi lihamba ngesantya esiphezulu kwicandelo lezolimo kunye noshishino lwezolimo olubangela uchulumanco ngokukhawuleza [kunye] nokugxila kubatyali zimali kunye nokubekwa phambili kutyalo-mali ukuya kwi 'oyile entsha' emiselwe ukuqhuba ilizwekazi. kwaye unikele nge I-US $ 1 trillion ngowama-2030. ”
Icandelo elinesihloko esithi "isithembiso sedigital kunye ne-biotechnologies kunye notshintsho lweenkqubo zokutya," lixoxa "ngokubaluleka kokufumana uqoqosho olukhulu, intlalontle kunye nokusingqongileyo ekusetyenzisweni kweemveliso zebhayoloji… eNtshona Afrika, umzekelo, amafama angazuza kakhulu ukususela ekwamkelweni komqhaphu weBt. ”
Eli phepha alibhekiseli kulingo olungaphumelelanga lwe-Bt yomqhaphu eBurkina Faso, ilizwe lokuqala e-Afrika ukwamkela isityalo esikhulu esenziwe ngemfuza kumafama amancinci. Umqhaphu wase-Bt wase-Monsanto waxhathisa izinambuzane kwaye wanikezela ngezivuno ezilungileyo, kodwa awukwazanga ukuzisa umgangatho ophezulu ofanayo nowendidi yemveli, kunye nelizwe ishiye isityalo se-GM.
Ibali laseBurkina Faso libonisauxakeke kangako xa ujongene nemfuza, ” Ingxelo zeReuters. “Kubalimi bekotoni baseBurkina Faso, iMG yaphela njengorhwebo phakathi kobungakanani nomgangatho. Kwi-Monsanto, ene-13.5 yezigidigidi zeerandi kwimali engenayo ngo-2016 yayingaphezulu kwe-GDP yaseBurkina Faso, oko kwabonakalisa ukungabi nakuqoqosho ukuyilungisa le mveliso ngokusondeleyo kwintengiso. ”
A uphononongo lweminyaka engama-20 yedatha kwikotoni ye-Bt e-India epapashwe kunyaka ophelileyo ifumanise ukuba umqhaphu wawungakhombisi kakuhle isivuno kwaye nangona ekuqaleni wawusinciphisile isidingo semithi yokubulala izitshabalalisi, "amafama ngoku achitha ngaphezulu kwi-pesticides namhlanje kunaphambi kokungeniswa kwe-Bt."
'Ilizwi elinye laseAfrika'
"Ukwakhiwa kwakhona kweendlela zokutya zehlabathi kuya… kuya kuxhomekeka kububanzi bokusasazwa kwetekhnoloji efanelekileyo kunye nezinto ezintsha," ngokuka uyilo lomgaqo-nkqubo omfutshane yenzelwe ingqungquthela. Olu xwebhu luchaza ii-webinars ezimbini kunye nengxoxo ekwi-intanethi ejolise ekwenzeni "i-One Africa Voice" ukuya kwingqungquthela yokutya "yotshintsho oluphambili lomdlalo olufunekayo ukomeleza uphando kunye nophuhliso lwezolimo e-Afrika."
Le nkqubo yabizwa ngokuzimeleyo kule ngqungquthela yeQonga lezoPhando lwezoLimo e-Afrika, kunye noMbutho woMdibaniso woGwayimbo lwase-Afrika, iiNkqubo zeSizwe zoPhando lwezoLimo kunye namanye amaqela ophando kunye nemigaqo-nkqubo. Iintshukumo zokutya zaseAfrika khange zibandakanyeke kwingxoxo, utshilo uMayet.
Izitshixo zokwenza inguqu kwinkqubo yokutya, ngokomgaqo omfutshane womgaqo-nkqubo, zibandakanya ukudala "imfuno esebenzayo yesayensi, itekhnoloji kunye nokuyila" kumafama asakhasayo, kunye nokukhuthaza oorhulumente base-Afrika ukuba batyale imali eninzi kuphando lwezolimo "nakwiimveliso zalo okt ubuchwepheshe kunye nezinto ezintsha."
Olu xwebhu luthi "kukho isidingo sokunikela ingqalelo ekuqokeleleni idatha nasekuphuhliseni izakhono zohlalutyo ezibonisa imbuyekezo" kuphando lwezolimo kuphuhliso kunye "nokuqulunqwa komgaqo-nkqubo olinganayo kunye nokuphunyezwa, okt imigaqo-nkqubo yokunyanzelisa amalungelo epropathi, kubandakanya ipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda. amalungelo, ukuvuza amafama ngeenkonzo ze-ikhosistim, ukuqinisekisa ukutya okukhuselekileyo okusempilweni ngamaxabiso afikelelekayo. ”
Ingxoxo “ibonakala imele enye indawo esemthethweni yokwakha imvumelwano yabantu abadala eza kuthi thaca kwiNgqungquthela ye-UN Food Systems Summit 'njengelizwi laseAfrika'… Kodwa ke, elo lizwi liyakuba kude kakhulu nelomntu oqhelekileyo waseAfrika, ”Utshilo u-ACB. "Endaweni yoko, ibonisa izinto eziphambili ngokubaluleka kwiingcali zophuhliso ezilungelelaniswe nemibono yotshintsho nenguqu eqhutywa yitekhnoloji, iinkampani zebhayoloji, ushishino ngezolimo, kunye neoliberal, ajenda yophuhliso lwehlabathi."
“I-Afrika kufuneka izibuze ngentsingiselo yemveliso, kunye nobudlelwane kwezentlalo apho amafama asakhasayo angafumana khona imveliso ebonakalayo ngokubhekisele kwimpilo yezoqoqosho nakwezobulungisa kwezentlalo nakwezendalo.”
Idabi lomgaqo-nkqubo eliguqukayo kwiNgqungquthela ye-2021 yeeNkqubo zokutya lisongela "ukunyanzelisa ukondla inkqubo yezokutya engaphumelelanga kwicandelo likarhulumente nakwezolimo zehlabathi, zibophelela oorhulumente kwi-ajenda yecandelo elijongela phantsi amafama, imibutho yoluntu, imibutho yezentlalo kunye ne-agroecology," a NgoFebruwari 2020 ingxelo evela kwiQela le-ETC Echaze amandla okudlala edibaneni lengqungquthela.
Elinye idabi eliphambili lichaphazela ikamva le-CGIAR, umanyano lwamaziko ophando kwezolimo ali-15 nangaphezulu kwe-10,000 izazinzulu kunye noochwephesha kumvuzo wabo kunye ne-800,000 yeentlobo zezityalo kwiibhanki zayo ze-11. Ummeli weGates Foundation kunye nenkokheli yangaphambili yeSyngenta Foundation baya phambili icebo lokuhlengahlengisa icebo lokudibanisa uthungelwano lube yi "One CGIAR" kunye nebhodi enye enegunya elitsha lokuseta i-ajenda.
Uhlengahlengiso olucetywayo, ngokwencwadi kaJulayi Ukusuka kwiPhaneli yamaZwe ngamaZwe kwiiNkqubo zokutya eziZinzileyo, babeya "Ukunciphisa ukuzimela kwee-ajenda zophando zengingqi kwaye uqinise ukubanjwa kwabona banikeli banamandla-uninzi lwabo aluthandabuzi ukuphambuka kwindlela ye-Green Revolution."
The inquboI-IPES ithe, "kubonakala ngathi iqhutyelwe phambili ngendlela yokunyanzelwa, kungathengwa nto kancinane kubantu ekucingelwa ukuba bangabaxhamli kuMazantsi ehlabathi, ngokungafaniyo okwaneleyo phakathi kwesangqa sabahlaziyi, nangaphandle kokuqwalaselwa ngokufanelekileyo ukutshintsha kwendlela yokutya. ”
Iingcali ezininzi zithi a Ukutshintsha kweparadigm kubalulekile kude ne ezolimo kwimizi-mveliso nakwiindlela ezahlukeneyo zolimo enokujongana neengxaki kunye nokusikelwa umda kwimodeli yangoku yezorhwebo, kubandakanya ukungalingani, ukwanda kwendlala, ukungondleki kunye nokonakaliswa kwenkqubo yezinto eziphilayo.
Kwi-2019, a Iphaneli ekumgangatho ophezulu yeengcali kukhuseleko lokutya kunye nesondlo I-UN icebisa ukutshintshela kwiinkqubo ezahlukeneyo zokutya, ukulungisa ukungalingani kwamandla kwiinkqubo zokutya, kunye notyalo-mali kwiinkqubo zophando ezixhasa i-agroecology njengendlela eya phambili.
Ingxoxo Yommandla: Iiseshoni Zesixhenxe Zenkqubo Yokutya e-Afrika kwiQonga leNgingqi lase-Afrika kuPhuhliso oluZinzileyo 4 kweyoKwindla 2021, eBrazzaville, eCongo, ECA, AUC, FAO, AUDA-NEPAD, WEP, UNICEF, IFAD, AfDB, Akademiya2063, RUFORUM (2021)
Ingxoxo yommandla: Iinkqubo zokutya zaseAfrika (i-ajenda 9), Ngolwesine nge-4 Matshi, kwi-UN Economic and Social Council
UMgaqo-nkqubo omfutshane, Ukomeleza uPhando lwezoLimo lwaseAfrika kunye noPhuhliso olujolise kwiNkqubo yokuPhucula iAfrika yokutya, "Ilizwi elinye le-Afrika" ukuya kwiNgqungquthela ye-UN ye-2021 yeeNkqubo zokutya, i-FARA, imibutho yoPhando yeNgingqi, i-NARS, i-AFAAS, i-AGRA, i-FANRPAN
Ukuphendula kwe-ACB kwiNgxoxo yeNgingqi kwiinkqubo zokutya zaseAfrikaLe ndibano ibibanjwe kwiNdibano yesiXhenxe yeQonga leNgingqi lase-Afrika loPhuhliso oluZinzileyo, ngomhla we-4 kweyoKwindla ngo-2021
IBill Gates yokuKhangela ukutya, GMO IZiko lase-Afrika leZinto ezahlukeneyo, I-AGRA, Umanyano kuHlaziyo oluLuhlaza e-Afrika, IGates Foundation, IPES, UMariam Mayet, Rockefeller Foundation, iKhomishini yeMbumba yamaZwe ase-Afrika, uMbutho woKutya nezoLimo we-UN, IKhomishini yezoQoqosho ye-UN ye-Afrika, I-UN FAO, KwiQumrhu loQoqosho loLuntu